Kusvirwa naBill Window Cleaner weKubasa! – Vanoda Zvinhu
On February 9, 2016 March 1, 2018 By svirorist
Thank God it’s Friday, ndaitoita mazuva ekuverenga apo ainge asingafambe. Ndainge ndapihwa one month contract pabasa raibhowa and ndaishandira ku 19th Floor kusina kana vanhu only receptionist and a Junior lawyer wandaibatsira.
I was assigned to audio typing debt-collecting letters for a junior lawyer, William. Ndakaona Will first day chete and ever since ndaizosvika kubasa ndowana aiisa maFiles and tapes on my desk. Ndaigara hangu ndiri serious saka William ainge akundi avoider since rimwe day randakamupindura rough after ataura nezve weather. Ndakatarisa time ndikaona its after mid day ndikati rega ndiende kunoita my last cup of coffee. Ndakati ndakuda kubuda ndikatanga kuona a shadow yaifamba padesk pangu apo yaibva kumashure kwangu ndakavhunduka nekuti ndaiziva kuti ndaive pa19th floor hapana anything of anyone aigona kuuya from the outside. Ndakacheuka slowly ndichida kuona kuti chii chaita shadow yacho ndikaona ona kuti paiva nemurume aiva pachimachine who was cleaning windows.
Ndakafara kumuona and I waved at him, akatanga kucleaner achiita kunge munhu arikunditambira zviri dirty and zvinototesa beche rangu. Ndainge ndakapfeka kamini skirt and pandakaona kuti arikuita zvekuda kundidenha , ndakaisa cup yangu pasi ndikatanga kukwiridzira mini yangu just teasing him ndakaona munhu akudonhedza rute plus akapotsa adonha ndikamhanya pawindow ndikavhura and I asked him to come and rest for a while. Ndainge ndagarisa ndisina kuuya murume aigona kunditokonya mukati mebeche rangu, saka ndakatoti chance given.Bill akapinda and I offered him coffee ndikanomuitira, hapana aiziva kuti muOffice mangu maiva nemunhu since ainge apinda nepawindow. Ndichibva kunoita coffee I locked door zvakangwara zvekuti Bill haana kana kuziva kuti ini ndainge ndatomurongera. Apedza kunwa coffee ndakanzwa akutaura paRadio telling vamwe vake kuti atora a short break pa19th Floor window was open.
I asked Bill kuti dance for me since ndawona uchiita sexi dancing, akatanga kunyara nyara zvikanzi I was just cleaning maWindow. Then he turned and said but iwewe you danced better ndapotsa ndatodonha nezvandaona. Ndakambokanganwa kuti ndaiva kubasa, ndakaisa my favourite slow music disk muka portable radio kangu ndikaisa soft volume ndisingaite noise coz ndainge ndisingade attention from receptionist, I started kutamba slowly ndichifamba ndichienda pana Bill ndoisa beche rangu kuface yake. Ndakaona munhu asimuka and he joined me takatamba for a while tikatanga kukisana paye with a total stranger and I loved it. Tiri pakati pekukisana Bill akaisa ruoko rwake muskirt yangu achindibata bata pant rangu apa ndainge ndatova very wet zvekuti bhurugwa rangu rakatoita chi stain chehunyoro, Bill akabva aribvisa ndokupfugama achinanzva beche nejuice dzese haana kutora nguva stereki akabva asimuka back to kissing apa ainge achiri akapfeka worksuit yake. Ndakapfungamawo ndikadhonzera trousers rake pasi ndikaona mboro pfupi asi iri kobvu yatomira kare, ndakaiyisa mumuromo ndikaidya kusvikira murume akatadza kutaura, I got a fright pakataura radio yake vamwe vake vakumuti shamwari pedzisa basa tiende kumba.
Bill akangoti guys 5 mins chete ndinenge ndapedza, hatina kuzotora kana nguva akandigarisa padesk zvekuti takambokanda paper work pasi ndikabva ndavhura makumbo iye akamira ndoiti pfeeee mukati, ndakaita kunge it was my first time ndichinzwa beche rangu richiita stretch nekufuta kwainge kwakaita mboro yake. Handaikwanisa kuridza mhere semunhu aiva kubasa asi dai ndaiva kumba ndaitochema chaiko, zvairwadza zvichinaka at the same time. This was my best Friday ever since ndatanga basa iri, apa naBill takangoudzana mazita chete asi hatina kana kupanana any numbers this was for one day only ende ndakanakirwa ndikatunda katwo before Bill jumped back to finish cleaning his windows.
Categories : DzesviroTags : kusvirwa
PREVIOUS POST Previous post: Ndakajuma zvimaBen Ten zvangu two, zvakandipedzera that day
NEXT POST Next post: Ummm mhosva imhozva zvayo asi mwana wechikoro mahwani